Tiknoolojiyadda nooca degdega ah
Tikniyoolajiyadda degdegga ah ee loo yaqaan 'prototyping technology', oo sidoo kale loo yaqaan tikniyoolajiyadda noocyada degdegga ah (teknoolojiyadda RP ee soo gaabin); Ingiriisi: RAPID PROTOTYPING (oo loo yaqaan 'RP technology'), ama RAPID PROTOTYPING WAX soo saar, oo loo yaqaan RPM. In warshadaha codsiyada baabuurta loo yaqaan nooc RP. Tiknoolajiyada RP waa mid ...
Falanqaynta rajada horumarka warshadaha caaryada
1. Rajada suuqa caaryada ee Shiinaha waa mid ballaadhan: ballaadhinta joogtada ah ee arjiga dalabka caaryada iyo shuruudaha aad iyo aad u sarreeya ee ku samaysmay qaab-dhismeedyadii hore loo adeegsaday ayaa warshadaha caaryada ka dhigtay kuwo ka dhakhso badan warshadaha kale ee wax soo saarka. Waxay noqotay sharci guud. Tan ...
Falanqaynta xaaladda taagan ee warshadaha caaryada ee sannadka 2020, warshaduhu waa mid aad u weyn oo aan la qiyaasi karin
Warshadaha jirka ayaa sii waday inay hoos u dhacaan sanadihii la soo dhaafay, iyo warshadaha caaryada ayaa sidoo kale si weyn loo saameeyay, laakiin suuqa weyn ayaa go'aamiya rajada horumarka. Sida laga soo xigtay tirakoobka dadweynaha ee qaranka, wadarta qiimaha warshadaha caaryada ayaa ka koray 136.731 bilyan sanadkii 2010 ilaa 240.0 ...